Deeq Somaliland u ururisay Soomaaliya - BBC News Somali
Deeq Somaliland u ururisay Soomaaliya
29 Agoosto 2011
Image caption Waddo ka mid ah Magaalada Hargeysa
Magaalada Hargeysa, gudiga xukuumadda Somaliland u magacawday gurmadka dadka tabaaleysan ee abaaruhu ku dhufteen ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ilaa iyo haatan ururiyeen qaadhaan lacageed oo ka badan lix boqol oo kun oo dollar .
Gudoomiyaha guddiga Somaliland ee gurmadka dadka tabaaleysan ee koonfurta somalilya, Axmed Xaaji Cali Cadami, ahna wasiirka gaashaandhiga ayaa BBC-da u sheegay maanta inay dowladda iyo shicibka Somaliland ka soo ururiyeen 634, 000 dollar.
Cadami wuxuu sheegay in qaadhaankan ay dawladda Somaliland bixisay iyadu laba boqol oo kun oo dollar. Lcagtaasi inta kale waxaa bixiyay ayuu yidhi Cdami ganacsatada kala duwan, shaqaalaha dawladda, ciidamada, ardada, ururada bulshada, iyo shicibka.
Guddigan oo ka kooban wasiiro, culimaa’uddiin, ganacsato iyo shakhsiyaad magac leh waxaa uu gudoomiyahoodu, Axmed Xaaji Cali Cadami, sheegay inay sii wadayaan qaadhaan ururintan iyagoo ka damqaday ayuu yidhi xaaladda macaluusha abaaruhu keeneen ee ay ku suganyihiin walaalahoodu.
Guddoomiyaha guddigan Somaliland ee gurmadka dadka tabaaleysan ee koonfurta Soomaaliya oo la weydiiyay sida ay mucaawinadan u gaadhsiinayaan dadkaasi jilicsan wuxuu ku jawaabay in tallaabadaasi ay tahay midda ay haatan aad uga fekerayaan in mucaawinadu toos u gaadho dadka ay ugu talo galeen.
Axmed Xaaji Cali Cadami guddoomiyaha guddigani wuxuu ugu baaqay qurba-jooga reer Somaliland ee dibedda inay iyaguna wixii kaalmo ah ee loo ururinaayo dadkaasi abaaruhu ku dhufteen ee koonfurta Soomaaliya ay ka qayb qaataan.
Guddigan waxaa laba todobaad kahor magacowday madaxtooyada Somaliland.